हरेक दिन फेला पर्दैछन् कोरोना लक्षणका नयाँ तथ्य,यी हुन् जान्नैपर्ने १० लक्षण
काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को मुख्य लक्षण उच्च ज्वरो, खोकी तथा सास फेर्न गाह्रो हुनु हो। तर यति मात्र नभएर नयाँ किसिमका लक्षणहरू पनि देखा परेका छन्।
वैज्ञानिकले यसका लक्षणबारे हरेक दिन नयाँ तथ्य फेला पार्दै गइरहेका छन्। वैज्ञानिकका अनुसार सुरुवातमा कुनै सामान्य रुघाखोकी जस्तै देखिएको भएपनि कुनै कुनै बिरामीमा चाहिँ फरक लक्षण देखिएका छन्।
सास फेर्न गाह्रो हुने सामान्यतः कोरोना भाइरसको सुरुवाती लक्षण होइन। तर यो पछि देखा पर्ने सबभन्दा गम्भीर लक्षण हो।
विज्ञका अनुसार यो खोकी बिना पनि शुरु हुन्छ। यदि तपाईंलाई छाती कस्सिएको जस्तो महसुस भएर लामो सास फेर्न सक्नु भएको छैन भने तुरुन्त विज्ञ डाक्टरसँग सम्पर्क गर्ने र परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ।
उनले राती कोही आएर आफूलाई कुटिरहेको जस्तो लागेको र पछि शरीर दुख्न थालेको बताएका छन्। उनले कहिल्यै नदेखेका कलेजका मान्छे तथा आफ्ना बाबुसँग कुरा गरिरहेको भ्रम भएको पनि बताएका छन्। "म भ्रमित भइरहेको थिएँ", उनले भनेका छन्, "मसँग मेरो बुवा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले कलेजमा कहिल्यै नदेखेका मान्छेहरू देखिरहेको थिएँ।"
अचनाक अलमल तथा भ्रम जस्तो हुने
सीएनएनका प्रमुख स्वास्थ्य संवाददाता डा. सन्जय गुप्ताका अनुसार केही संक्रमितमा पखाला र ग्यास्ट्रिकको समस्या समेत देखिएको छ।
गन्ध र स्वाद थाहा नपाउनु पनि कोरोना भाइरसको एक लक्षणको रूपमा पछिल्लो समय पत्ता लागेको छ। डा. गुप्ताका अनुसार यस्ता लक्षण भएका बिरामीको संख्या अमेरिकामा बढिरहेको छ।
यदि तपाई ६० वर्षभन्दा माथि तथा गर्भवती हुनुहुन्छ भने यस्तो लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।